Carbide strip, nke etinyere n'ọtụtụ ebe n'ịrụ osisi na ịrụ ọrụ okwute. Nhọrọ ọkwa ọkwa dị oke mkpa, akara ule siri ike nwere ike ịdị ogologo ndụ, agbanyeghị, ọkwa dị nro na -adịkarị mgbe igwe ma ọ bụ ịgbado ọkụ adịghị mma.
Carbide strip, nke etinyere n'ọtụtụ ebe n'ịrụ osisi na ịrụ ọrụ okwute. Nhọrọ ọkwa ọkwa dị oke mkpa, akara ule siri ike nwere ike ịdị ogologo ndụ, agbanyeghị, ọkwa dị nro na -adịkarị mgbe igwe ma ọ bụ ịgbado ọkụ adịghị mma. Anyị azụlitela akara nzere dị iche iche maka ọnọdụ dị iche iche, dị ka nke dị n'okpuru
N'ọnọdụ ụfọdụ, enwere ike itinye eriri carbide dị ka nkwado igwe na -egwe ihe, n'ihi oke ike ya, na -eyi nguzogide, nguzogide corrosion nke carbide tungsten. Na ngwa a, enwere ike ịchọ ogologo ka ọ bụrụ ihe karịrị 1m, dịka ọmụmaatụ, 1.2m, warara kachasị ogologo anyị mere maka onye ahịa bụ 1.5m.
Nke gara aga: Ụlọ ọrụ Carbide End
Osote: Mkpanaka Carbide